Abicah irabha - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
Abicah irabha i rubber chain ogama eyintloko ubunjwe lesilicon neoksijini athom khosi, kwaye kukho ngokuqhelekileyo amaqela amabini organic uqhagamshele atom lesilicon. It enokumelana okuhle lobushushu eliphantsi yaye luyakwazi ukusebenza kwi -55 ℃.
Kukho iindlela ezininzi zokuhlela abicah irabha. Ngokutsho ifomu phambi kokuba ephilisa, oko lungohlulwa lube lobushushu Room abicah vulcanized irabha, iqondo eliphezulu abicah vulcanized irabha. Ngokutsho monomer kusetyenziswa, oko lungohlulwa lube imethyl IVinyl abicah irabha, imethyl phenyl IVinyl abicah irabha, fluorosilicone, zilahlwe abicah irabha kunye njalo njalo. Yaye ngokutsho iiyantlukwano yokusebenza kunye nokusetyenziswa, oko kwahlulwa ibe uhlobo jikelele, ubushushu uhlobo enganyangekiyo aphansi, ubushushu uhlobo okuphezulu ukumelana, uhlobo aphezulu amandla, ioli uhlobo ukumelana, uhlobo lonyango njalo njalo.
Cebisa izixhobo imveliso zokuthambisa: LXQLF Series Multi-umsebenzi Triple Shaft Umxhubi, LXQLFQ Series Enhanced Multi-umsebenzi Triple Shaft Umxhubi, LXXJB series Umxhubi langa, LXDLH Series amandla langa Umxhubi,